Fiompiana : tsy mety tafarina hatramin’izao ny fihariana ronono | NewsMada
Fiompiana : tsy mety tafarina hatramin’izao ny fihariana ronono
Par Taratra sur 10/10/2020
Sahirana amin’izao fotoana izao ireo mpiompy omby fa­kana ronono any amin’ny faritra Vakinankaratra, Itasy, sy Analamanga. Mandalo fotoan-tsarotra ity fihariana iray ity amin’izao fotoana izao, na efa afaka amin’ny fihibohana aza ny kaominina maro misy ireo omby fakana ronono. Nan­dritra ny fihibohana, 50 % ny ronono lafo raha nisy nandray fa hatramin’izao, sarotra ny fanarenana ny fihariana ataon’ ireo mpiompy sy mpanangom-bokatra. Ankehitriny, tsy misy ny vilona, mihalafo ny vidin’ny provandy sy katsaka ho an’ireo ombivavy. Na mi­tobaka aza ny ronono amina toerana iray, mbola antsasany ihany ny vidiny sy ny lafo.
Sarotra ny vokatra ronono izao fa miezaka ireo mpanangom-bokatra sasany mitady fanampiana ho an’ireo mpi­ompy, amin’ny sakafon’ireo omby ireo. Misy koa ny fiaraha-miasa amin’ny tetikasa Casef*, mizara fitaovana ahazoana mamerina ireo mpanatitra ronono ao amin’ny toby manangona izany. Mila tosika ankehitriny ireo mpiompy ombivavy hanarenana ity fihariana ity. Sarotra ny famoka­rana tao anatin’ny mainandro teo. Miditra indray izao ny fahavaratra, sarotra ny mamerina voly vilona, noho ny vanim-potoana miovaova,
Misy mikatona ireo mpanodina ronono
Noho ny valanaretina Covid-19 ihany, tsy afa-manoatra hatramin’izao ireo kaoperativa maro mpanangom-bokatra. Raha nividy 1000 litatra isan’andro tany aloha, mijanona ho 600 litatra izany izao. Misy mikatona ankehitriny ny sasany amin’ireo mpanodina ro­nono. Ireo mpiompy anefa tsy maintsy mamahana isan’andro ny ombiny koa, izay ny andra­sana amin’ny fanampian’ny fanjakana amin’ny alalan’ny Casef, manome fitaovana ilaina amin’ny fiompiana. Nanam­bara ny minisiteran’ny Fam­bolena, fiompiana ary ny jono fa hanafatra ombivavy 1000 ny fanjakana, tetikasa tohanan’ ny Banky iraisam-pirenena. Ho hita eo ny fanatanterahana izany.
Casef* : Croissance agricole et de sécurisation foncière